HomeWararka MaantaBarcelona: 19 Ciyaarood Ayay Guuleysatay 20-kii kulan ee u dambeeyey
Barcelona ayaa dardar ku socota sannadkan, waxay qaybtii dambe ee xili-ciyaareedka la soo baxday ciyaar wanaagsan iyo isfaham dhexmaray weerarka saddex aflaha ah ee aan cidina hor istaagi karin.
Bilowgii xili-ciyaareedka waxay u muuqdeen in xaaladdu ku xun tahay wiilasha Tababare Luis Enrique, waxana jiray in xidhiidhka uu la lahaa xiddiga kooxdaas ee Lionel Messi uu xumaa kaas oo dhamaan warbaahintu ku qori jireen bogga hore.
Waxay bilowgiiba guul-darraysteen kulankii ay la yeesheen Real Madrid, waxa ugu xigtay guul-darro kale oo ay kala kulmeen garoonka Parc des Princes oo ay PSG ku garaacday. Waxa kale oo la isla dhex maray qaab-ciyaareedka Messi in uu hoos u dhacay, isla markaana habka-difaac ee kooxdu uu burburay.
Waxaas oo dhan hadda waa ay dhamaadeen, waxaanay dib ugu laabatay jidkii ay caanka ku ahayd ee guulaha. 20kii ciyaarood ee u dambeeyey, waxay guulaysatay 19 ka mid ah, taas oo ay macnaheedu tahay in 95% ay guul gaadhay ciyaarihii u dambeeyey. Waxay Barca kordhisay goolasha ay ciyaar walba dhaliso oo ay ka dhigtay celcelis ahaan 3.41 ciyaar walba, iyadoo jebisay rikoodhkii hore u yaallay ee ahaa 2.35. qaab-ciyaareedkan dambe, waxa uu u saamaxay in ay garaacdo kooxaha PSG, Manchester City iyo Real Madrid.
Messi ayaa dib ugu soo noqday heerkiisii lagu yaqaanay, waxa kale oo shaac baxay Suarez iyadoo difaacyahannada Gerard Pique iyo Jeremy Mathieu ay wada shaqayn fiican muujiyeen.
Barcelona waxay hadda taagan tahay Finalka Copa del Rey, Rubuc-dhamaadka Champions League iyo kaalinta ugu sarraysa ee horyaalka dalka Spain. Ciyaarta kaliya ee laga badiyey 20ka kulan ee u dambeeyey waxay ahayd ciyaartii Malaga garaacday ee garoonka Camp Nou, taasna hadda waa la iloobay.
Xulka England Oo Dirqi Kaga Adkaaday Wales Xilli Sturage Uu Shimbir U Noqday
Dhalasho Wanaagsan Lionel Messi: Xiddiga Ugu Guulaha Badan Dunida